Notsapainay ny angovo Headphones BT9, ny headphones vaovao sy matanjaka avy amin'ny Energy Sistem | Androidsis
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia nampahafantatra anao ny fandefasana ny Headphones amin'ny angovo BT9, ny headphones vaovao avy amin'ny Rafitra angovo. Androany dia miresaka momba azy ireo indray izahay satria nanararaotra nanandrana azy ireo ary tianay hambara aminao ny zavatra niainanay. Rariny ve ny orinasa espaniola milaza fa miaraka amin'izy ireo isika dia hanana fahatsapana mihaino mozika amin'ny 3D? Izahay dia manamarina azy:
1 Unboxing an'ny angovo Headphones BT9
2 Ny mampiavaka ny headphones angovo BT9
Unboxing an'ny angovo Headphones BT9
Toy ny mahazatra amin'ny vokatra rehetra an'ny Rafitra angovo, raha vao manokatra ilay boaty dia ho hitantsika tsara. ny Headphones amin'ny angovo BT9 voaaro tsara izy ireo. Amin'ny voalohany dia ho hitantsika ao anaty boaty lehibe iray izay ahitantsika tranga tsotra misy ny logo an'ny orinasa sy boaty kely misy ny kojakojan-tsarimihetsika.
Rehefa manokatra ny raharaha isika dia mahita ny Headphones amin'ny angovo BT9 aforitra raha mbola ao anaty boaty kely dia manana ny torolàlana sy ny sticker izay tonga amin'ny vokatra avy amin'ny orinasa izahay, tariby audio 3,5mm, tariby USB, carabiner hahafahantsika manantona ny headphones antsika na aiza na aiza ary brochure misy fampahalalana momba ny vokatra hafa Rafitra angovo.
Ny mampiavaka ny headphones angovo BT9
Averinay izay nolazainay anao rehefa nandinika ny Energy Wireless BT8 Fanafoanana ny feo: rehefa mividy headphones dia mila manamarina isika fa mahazo aina izy ireo ary afaka henoina tsara. ny Headphones amin'ny angovo BT9 mihoatra ny mahafeno ireo tanjona ireo izy ireo.
Ny feo avoakan'izy ireo dia tena tsara. Misaotra ireo mpandahateny 8 miaraka amin'ny haitao multidriver sy ireo maodelim-pitoviana 5 efa voafaritra mialoha, afaka mihaino tsara karazana karazan-mozika isika, mila mifidy izay mety indrindra amin'ny karazana tsirairay fotsiny isika. Toy izany koa isika afaka mijery sarimihetsika amin'ny alina nefa tsy manelingelina ny mpiara-monina amintsika, nefa tsy very ny kalitaon'ny feo noho ny fananana ny fakan-tsarimihetsika, ary izany no Headphones amin'ny angovo BT9 manolotra izay nampanantenainy izy ireo, hanana ny fahatsapana ho ao amin'ny sinema izahay, tena mahavariana tokoa ny feo.
Afaka mihaino mozika isika na amin'ny karatra microSD na amin'ny alàlan'ny Bluetooth. Raha te hihaino azy amin'ny microSD isika dia tsy maintsy manindry ny bokotra on sy mivoaka izay miseho amin'ny iray amin'ireo sisiny, ary raha te hampifandray amin'ny alàlan'ny Bluetooth amin'ny fitaovana hafa isika Headphones amin'ny angovo BT9 Manana bokotra "majika" izy ireo hahafahantsika manatanteraka mora foana ity asa ity. Mba hampifanarahana ny headphones dia mila manindry ny bokotra fiantsoana isika mandritra ny segondra vitsy, mandra-pisian'ny jiro manga sy mena. Raha vantany vao vita io dia handeha any amin'ny finday, solosaina finday na takelaka misy antsika hifandray amin'izy ireo isika. Hisafidy headphones ao anaty menio isika ary izay ihany. Ho fantatsika fa mifandray tsara izy ireo satria hijanona tsy hitsilopilopy ny jiro.
Sarotra loatra aminao? écouteur Rafitra angovo avelany ihany koa ny fampifanarahana Neal Field Communication (NFC). Mila mitondra ny fitaovanao hanakaiky kokoa an'ilay kisary ianao NFC ny headphones mandritra ny segondra vitsy hahafahana mampifanaraka ireo fitaovana roa tsy misy olana.
ny Headphones amin'ny angovo BT9 mamela antsika hamaly antso ihany koa izy ireo. Mba hanaovana izany dia mila ampifanarahina amin'ny finday avo lenta fotsiny ny headphones amin'ny alàlan'ny finday avo lenta ary tsindrio ny bokotra antso hamaly. Amin'ny faran'ny tsipika iray dia hohenoiny tanteraka isika noho ny tabataba mikraoba manafoana izany Headphones amin'ny angovo BT9 Izy ireo dia tafiditra ao anatin'ny iray amin'ny headphones. Rehefa te-hihantona ianao dia tsindrio ilay bokotra mitovy sy voila dia hiverina eo amin'ny toerana nijanonanao ny hira.
ny Headphones amin'ny angovo BT9 mahazo aina be izy ireo noho ny pad izay entiny roa amin'ny sisiny sy eo an-tampony; Mora ampiasaina izy ireo, maivana (milanja 282 grama fotsiny), ary tsara ny feony. Ho fanampin'izay, manana bateria 650 mAh izy ireo hahafahanay mihaino mozika hatramin'ny 16 ora misesy. Izany rehetra izany dia heverinay fa Rafitra angovo dia namorona headphone tena tsara. Raha tianao tahaka azy ireo izy dia afaka mahita azy ireo amin'ny fivarotana an-tserasera amin'ny orinasa amin'ny € 109 fotsiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Notsapainay ny angovo Headphones BT9, ny headphones vaovao sy matanjaka avy amin'ny Energy Sistem
Ny Moto 360 dia azo vidiana izao ao amin'ny Google Play Store
[APK] Sintomy ary apetaho ny equalizer 10-band vaovao an'ny OnePlus One MaxxAudio